Mucaarad Ruush ah oo iska dhiibey Iswiidhen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mucaarad Ruush ah oo iska dhiibey Iswiidhen
La daabacay tisdag 13 augusti 2013 kl 11.49
Aleksej Sakhnin oo kamid ah hormoodka mocaaradka dhanka bixidix dalka Rushka ayaa magan-geliyo siyaasadeed weydiistey dalka Iswedhen, sida uu noo sheegey mar uu wareysi siinayey laanta caalamiga ah ee raadiyaha Iswedhen.
Waxuu katirsanyahay xisbiga bidixda oo hogaamiyahooda rasmiga ah ku jiro xabsi guri illa iyo bishii februari, kaas oo ku eedeysan kacin iyo abuurintan xaalad welwel leh oo siyaasadeed. Waxuuna qatar ugu jira in lagu rido xukun xabsi oo dheer. Sidoo kale wakiilo badan oo katrisan garabyada bidix ayaa ah maxkamad sugayaal kadib markii ay dhigeen mudahraad ay kaga soo horjeedaan madaxdweyne Vladimir Putin bishii maj sannadkii hore.
Aleksej Sakhnin ayaa SR International u sheegey in garabyada midig ay bartilmaameed u yahiin weerka ay xukumada dalkas ku heyso mocaaradka. Waxuuna sheegey in uu hubo in la qabanayo oo la xirayo hadii uu ku noqdo dalka Rushka
Waxuuna ku micneeyey in uu ka dalbado maganeliyo siyaasaded dalkan Iswedhen in garabyada siyaasaded ee bidixda ay dhaqmiyan ku xooganyahiin halkan.